सरल र पारदर्शी ढङ्गले सेवा दिएका छौँ
November 9, 2017 November 9, 2017 gautam buddha sandesh0Comments
सञ्चालकः बि.एन. मानन्धर
बुटवलको रामनगरमा विगत ८ महिना देखि सक्सेस बिजनेस नामक संस्था सञ्चालित छ । थोरै खर्च, छोटो समय र सरल ढंगले सेवा पु¥याई सबैको मन जित्न पनि सफल भएको संस्थाको दावी छ । संस्थासंग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित भई गौतमबुद्ध सन्देश दैनिकका लागि जीवन थापाले गरेको कुराकानीको अंश :
तपाईको संस्थाको बारेमा छोटकरीमा बताइदिनुस् न ।
खासगरी यस संस्थाले कुनै पनि कारोवार गर्नुपर्दा खरिदकर्ता र विक्रेता बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क मा काम गर्छ । हामीले अहिले ४–५ प्रकारका सेवा उपलब्ध गराइरहेका छौँ । यस संस्थाबाट उपलब्ध सेवाहरुमा घरजग्गा खरिद विक्रि, गाडी खरीद विक्रि,सटर फ्ल्याट तथा कोठाको प्रबन्ध मिलाउने, रोजगारी तथा कर्मचारी उपलब्ध गराउने, कुनै पनि व्यवसाय गर्न चाहनेलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव दिने लगायतका कामहरु गर्दै आएका छौँ । हाम्रो संस्थाबाट जो कोहि ले पनि सेवा लिन सक्छन् । हामीले सेवा दिएवापतको आम्दानीबाट १० प्रतिशत रकम अनाथ तथा बृद्धबृद्धाहरुलाई सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।
यस संस्थाको मुख्य उद्देश्य के हो ?
अहिले मौलाइरहेको जुन ठगी र कमिसनको प्रथा छ,त्यसलाई निरुत्साहीत गरी सरल तरिकाले सेवा पु¥याउनु नै यस संस्थाको मुख्य उद्देश्य हो । हामीले अहिले सबै सेवाग्राहीलाई पारदर्शी ढंगले सेवा पु¥याई रहेका छौं । अहिले धेरैजसो व्यक्तिहरु ठगिएको अवस्थामा हामी सेवाग्राहीहरु ठगिनबाट जोगाउंछौं ।
सेवाग्राहीबाट के–कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
अहिलेसम्म त सबैलाई सन्तुष्ट बनाउन सफल भएका छौं भन्ने हामीलाई लागेको छ । हामिबाट सेवा लिनुभएका सेवाग्राही पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । यहाँबाट जो कोहीले पनि सेवा लिई रहनुभएको छ उहांले थप प्रचारका साथ साथै हौसला बढाउनुभएको छ, उहाँहरुले अन्य व्यक्तिलाई पनि हाम्रो सम्पर्क ल्याउनुहुन्छ, हामीले पनि उनीहरुलाइ सक्दो सहयोग गरिरहेका छौं ।
अहिलेसम्म के सम्बन्धि कारोबार बढी भएको छ ?
सबैजसो काम उत्तिकै मात्रामा भइरहेका छन्, तथापी अहिले खासगरी खरीद बिक्रि सम्बन्धि काम बढी भइरहेको छ ।
यससँग सम्बन्धित अन्य संस्था पनि यस्तै काममा आबद्ध छन्,ती संस्था र तपाईको संस्थामा फरक के त ?
फरक त धेरै नै छ, अरुबाट भन्दा हामीबाट प्रत्यक्ष र निष्पक्ष ढंगले काम हुन्छ । अर्को कुरा यहाँ जागीर लगाइदिने काममा ५० प्रतिशत सेवा शुल्क लिई काम गरिरहेका पनि धरै छन्, तर हामिहरुले २५ प्रतिशत सेवा शुल्कमा काम गर्छौं,त्यस्तै खरीद बिक्रि गर्ने काममा विक्रेता पक्षबाट ५ प्रतिशतमा काम गर्छौैं, यी लगायतका फरक रहेका छन् ।
आम्दानीको १० प्रतिशत रकम अनाथ तथा बृद्ध–बृद्धाको सहयोगार्थ उपलब्ध गराउंछौँ भन्नुभयो, अहिलेसम्म के–कति सहयोग गर्नुभयो ?
त्यस्तो ठुलो सहयोग त गरेका छैनौँ तर हाम्रो पहिलो वार्षिक उत्सवबाट सहयोग उपलब्ध गराउने योजना छौँ । यो कार्यलाई हामी निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि ब्यक्त गर्दछौँ ।
काम गरिरहंदा चुनौती के–कस्ता आइपर्छन् ?
चुनौती त धेरै आइपर्छन,सबैलाई विश्वास दिलाउनै गाह्रो छ, सबै खालका चुनौतीलाई सामना गर्न त गाह्रो नै हुन्छ, तर सबैलाई मिलाएर सबैलाई खुशी बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ ।
आगामी योजना के–कस्ता छन् ?
यसलाई देशव्यापी बनाउने, अबको एक बर्ष सम्ममा दुई शाखा स्थापना गर्ने योजना रहेको छौँ ।अहिले यो संस्थामा मेरो एक्लो लगानी भएपनि शाखा खोल्ने क्रममा अन्य शेयर पनि थप्ने योजना बनिरहेको छ ।
अन्त्यमा के भन्न चाहनुहन्छ ?
सुनेको भरमा भन्दा पनि बुझेर जानुभो भने राम्रो हुनेछ । हामिले सबैको हितको लागि काम गछौँ, हाम्रो सेवा लिंदा तपाइहरु ढुक्क हुनुभए हुन्छ र अन्त्यमा गलत मान्छेको पछि नलाग्नुहोला भन्न चाहन्छु ।
← गौतमबुद्ध सन्देश दैनिकको कार्तिक 23 गतेको छापामा..
प्रेमिकालाई आयो यस्तो कडा चेतावनी
March 5, 2018 gautam buddha sandesh 0
October 30, 2017 gautam buddha sandesh 0
December 1, 2017 gautam buddha sandesh 0